स्वेज नहरको अवरोधले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव : प्रतिदिन ११ खर्बको व्यापार ठप्प ~ Banking Khabar
स्वेज नहरको अवरोधले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव : प्रतिदिन ११ खर्बको व्यापार ठप्प
बैंकिङ खबर/ मंगलबार (२३ मार्चमा) विश्वव्यापारको प्रमुख ढुवानीको माध्यम जलमार्गमा अकल्पनीय र अप्रत्यासित घटना घट्यो । चीनबाट युरोप गइरहेको मालवाहक जहाज ‘एभरग्रिन’ तेज हावा र बालुवायुक्त तुफानको चपेटामा आयो, जसका कारण जहाज नहरमा तेर्सो भएर फस्यो । एभरग्रिन दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो मालवाहक जहाजमध्ये एक हो । ४ सय मिटर लम्बाइ र ५३ मिटर चौडाइको यो जहाजको वजन दुई लाख टन छ । यसले तीनवटा फुटबल ग्राउन्डलाई एकै ठाउँमा जोडेभन्दा पनि बढी ठाउँ ओगट्छ ।
जहाजलाई रुटमा फर्काउने सबै प्रारम्भिक प्रयास विफल भइसकेका छन् । नहरका कर्मचारीले ड्रेजिङ गराए, टकबोट्सको प्रयोग गरे, जहाजमुनिको बालुवा निकाले तर जहाज टसमस भएको छैन । अहिले पनि स्थिति त्यहीँ फसेको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार जहाजलाई बाहिर निकाल्नमा अझै केही साता लाग्न सक्छ । शनिबार सिपिङ कम्पनीले इन्जिन जहाजका प्राविधिक पक्षमा कुनै समस्या नदेखिएको बताएको छ । कम्पनीले एकपटक फसेको अवस्थाबाट निकाल्न सकिएमा जहाजलाई पूर्ववत् चलाउन सकिने अनुमान कम्पनीको छ ।
जामको असर विश्वव्यापी : प्रतिदिन ११ खर्बको व्यापार प्रभावित
यो जामका कारण १ सय ९३ किमि लामो नहर बन्द भएको छ । जहाज फसेको भागबाट दुवैतर्फ करिब ३ सय जहाज बाटो खुल्ने प्रतीक्षामा छन् । यी जहाजमा तेल, प्राकृतिक ज्ञास, कार प्रडक्ट्स, प्रोजेन फुड्स, कपडासहित कैयौँ अत्यावश्यक सामान रोकिएका छन् । यदि यो जाम छिटो खुलेन भने तेल तथा ज्ञासको मूल्य बढ्न सक्ने आशंका गरिँदै छ । यसबाहेक जर्मन कार कम्पनीहरूको काम ठप्प हुने डरले सताएको छ ।
आँकडामा हेर्ने हो भने स्वेज नहरको यो अवरोधले प्रतिदिन ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापारमा असर परिरहेको अनुमान छ । यो रकम झन्डै नेपालको वार्षिक बजेटबराबर हो । स्वेज नहरबाट दुनियाँको करिब १० प्रतिशत व्यापार हुन्छ । यो इजिप्टको व्यापारको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो । नहरमा जलमार्ग अवरुद्ध हुँदा इजिप्टले प्रतिदिन अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरिरहेको छ । २०२० मा इजिप्टले स्वेज नहरको टोल ट्याक्सबाट करिब ७ खर्ब कमाएको थियो । यो जाम जति लामो समयसम्म लम्बिन्छ, त्यसले आर्थिक नोक्सानी त हुन्छ नै, साथै कैयौँ देशमा अत्यावश्यक सामानको अभाव हुने आशंका समेत बढेको छ ।
स्वेज क्यानल अथोरिटी जहाजलाई स्वाभाविक मार्गमा फर्काउने कोसिसमा लागिरहेको छ । त्यहाँ लगातार डर्ेजिङ गरिँदै छ, यसका अलावा मद्दतका लागि विदेशी विशेषज्ञहरूलाई पनि बोलाइएको छ । अधिकारीहरूले मौसममा पनि आश गरेर बसेका छन् । एउटा सम्भावना छ कि पानीको सतह अचानक बढ्यो भने जहाज बाहिर आउन सक्छ ।
अधिकारीहरू जहाजमा राखिएका कन्टेनरलाई बाहिर निकाल्नेबारे पनि सोचिरहेका छन् । यसले जहाजको भार हल्का हुन्छ, त्यसपछि जहाजलाई कटबोट्सको सहयोगले तान्न सकिन्छ । यो विकल्प पनि खुला राखिएको छ । यद्यपि, यो प्रक्रियामा लामो समय खर्च हुन सक्छ ।
के गरिरहेका छन् सिपिङ कम्पनीहरू ?
जति पनि जहाज बाटो खुल्ने पर्खाइमा छन्, उनीहरू दोस्रो वैकल्पिक मार्गको खोजी गरिरहेका छन् । जानकारका अनुसार उनीहरूले अफ्रिकाको चक्कर लगाएर रुट पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका कारण दूरी करिब चार हजार किमि बढ्नेछ, समय ९ देखि १० दिन बढी लाग्नेछ । तर, रोकिएर कुर्नुको दाँजोमा यो थोरै फायदाजनक देखिन्छ । यसबाहेक सिपिङ कम्पनीहरू महँगा सामानलाई एयरलिफ्ट गर्नेबारे पनि सोचिरहेका छन् ।
१५२ वर्षमा दोस्रोपटक अवरुद्ध
स्वेज नहर इजरायल र इजिप्टको लडाइँको समयमा ८ सालसम्म बन्द भएको थियो । १९६७ देखि १९७५ सम्म राजनीतिक कारणले बन्द रहेको नहर त्यसअघि र पछि कहिल्यै बन्द भएको थिएन । दुवै विश्वयुद्धको समयमा पनि नहरको काम चलि नै रहेको थियो । यसपटकको शंकट अकल्पनीय छ, जसले मानवको बुझाइमा नयाँ चुनौती खडा गरिदिएको छ । यसमाथि विजय कहिले प्राप्त हुन्छ ? यो भने आगामी समयले नै बताउनेछ ।
दुई समुद्र जोड्ने सबैभन्दा लामो मानवनिर्मित नहर
फ्रान्सको अगुवाइमा सन् १८५९ मा निर्माण सुरु भएको स्वेज नहरको उद्घाटन १८६९ मा भएको थियो । नहरको निर्माणमा १५ लाख मजदुरले १० वर्षसम्म दिनरात काम गरेका थिए, जसमध्ये १ लाख मजदुरले ज्यान गुमाए । २६ जुलाई १९५६ मा इजिप्टले नहरलाई राष्ट्रियकरण गरेको थियो । यो हिन्द महासागरसित उत्तरमा जोडिएको लाल सागर र युरोप र अफ्रिकालाई छुट्याउने भूमध्यसागरलाई जोड्न जमिनको भागलाई समुद्री सतहसम्म पुग्ने गरी काटेर निर्माण गरिएको नहर हो । अफ्रिकी मुलुक इजिप्मा पर्ने यस नहरको लम्बाइ १ सय ९३ किलोमिटर छ, जुन सबैभन्दा लामो मानवनिर्मित नहर हो ।